Blog Aha Echiche: Atụmatụ Iji Họrọ El zuru okè Aha N'ihi na gị Blog
Kedu ihe mgbagwoju kachasị na blogger ọ bụla na-eche?
Na-agbalị ịhọrọ aha maka blog ha.
Ọkpọ blog nwere ike ịbụ ihe siri ezigbo ike, karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ maka ịde blọgụ na ịkọ ihe. Ma ọ bụrụ na ị dị ka m, ị nwere ike iji ọtụtụ awa na-atụgharị uche maka aha, naanị iji mejupụta ndepụta nke crappy.
N’ezie, e nwere ụzọ ka mma?
Ọfọn, obi dị m ụtọ na ị jụrụ! Ọ bụrụ na ị bụ ụdị kpọrọ asị na-eme aha ma ọ bụ na ọ bụ ihe dị egwu na ya, abịawo m ụfọdụ atụmatụ na usoro iji nyere gị aka ịmepụta ma wepụta aha zuru oke maka blog gị.
1 ND # MỌD # # 1: Ghọta otu aha gị si na-anọchite ika gị na Blog
2 Ntuziaka # 2: Nwee Thesaurus dị njikere ma nweta ihe okike!
3 Ntuziaka # 3: sustantivos Jiri, verbos, ma ọ bụ Ọbụna Okwu Nkọwa Na-ekwu Banyere Gị na Ọdịnaya Gị
3.1 Ntụle ọkwa nke ọkwa: Iji Okwu emepụtara ma ọ bụ Ịchọta Okwu nke Gị
4 Ntuziaka # 4: Mgbe niile na-ada, Jiri Blog Aha / Okwu Generator
5 Ịchọta Aha Aha Zuru Okè
ND # MỌD # # 1: Ghọta otu aha gị si na-anọchite ika gị na Blog
Tupu anyị arịgoo iwepụ aha ndị na-ede aha nchịkọta, ọ dị mkpa iwepụ oge ma ghọta ihe blog na aha aha gị na-anọchite anya ya.
Jụọ onwe gị ajụjụ anọ a:
Kedu ihe blog gị ga-abụ?
Ole ndị ga-abụ ndị na-ege ntị?
Kedu ụdị ụda (ụda, ihe siri ike, wdg) ọ ga – abụ?
Kedu ka aha aha blog ga – esi nyere gị aka ịmepụta ika gị?
Aha blog gị kwesịrị ịkọ na ụdị ọdịnaya ị na-eme. ¿Eran ustedes na? Nwere blog nke a na-akpọ "Rincón gastronómico" ma ọdịnaya gị bụ maka ịtụle ihe gbasara ntutu isi maka ụmụ nwoke, ị ga – eme ka ndị na – agụgụ ihe na –
N’otu aka ahụ, ọ bụrụ na ị nwere aha ụlọ ọrụ / nke dị jụụ ma dee ya n’olu ụda olu, ọ na-enye onye na-agụ ya ihe na-ezighị ezi wee hapụ ha ka ha eche ma hà kwesịrị iji gị kpọrọ ihe ma ọ bụ na ha ekwesịghị.
Na-agbanwe agbanwe na ika gị na ihe ọ na-anọchite anya ya!
Ọ bụrụ na ị chọrọ malite blog nri, ị ga-eji okwu ndị metụtara nri ma ọ bụ iri nri (ya bụ, merienda, vegana, saludable, chomping, wdg).
Ọ bụrụ na blog gị banyere usoro azụmahịa, ị na-eji isiokwu ndị metụtara ụlọ ọrụ ndị ahụ ma ọ bụ jiri okwu nkwekọrịta (dịka SEO, ahịa dijitalụ, SEM wdg).
Ntuziaka # 2: Nwee Thesaurus dị njikere ma nweta ihe okike!
N’oge a, ị ga-enwe echiche nke okwu ndị kachasị mma ịkọwapụtara na blog gị. Ugbu a na-abịa ebe egwuregwu ahụ! Buru aisaurus, ma obu buru ibu thesaurus.com, na lelee okwu ndị yiri ya nke a nwere ike iji maka aha blog gị.
Ka anyị kwuo na ị na-eme blọọgụ nri. Ị nwere ike ikpebi na ọtụtụ ọdịnaya gị ga-abụ isiokwu ndị na-esonụ: Nri, nri siri ike, vegano, mmega ahụ, obi ụtọ, ntụziaka, na ihe oriri.
Tinye okwu ndị ahụ n’ime thesaurus.com na ị ga-enweta okwu ndị dị ka nri, nri, ọhụụ, mma, ọṅụ, goodies, nri, munchies, ike, obi, veggies, na obi ụtọ. Tinye ụfọdụ okwu ndị ahụ ọnụ (dị ka vegan munchies o Kwado nri nri) na voila, ị nwere aha maka blog gị.
Mgbe ị nọgidesiri ike na-eche echiche maka okwu iji aha gị blog, w nwere ike iji thesaurus mee ihe ngwa ngwa maka ndepụta okwu.
Ntuziaka # 3: sustantivos Jiri, verbos, ma ọ bụ Ọbụna Okwu Nkọwa Na-ekwu Banyere Gị na Ọdịnaya Gị
Ị nwere ike ikpebi na Iji thesaurus ahụ zuru ezu, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịme egwuregwu gị na ọkwa ọzọ, malite na-agbakwụnye mkpụrụ okwu, okwu verbos na / ma ọ bụ nkọwa.
Ntinye ederede, verbos, na okwu ịkọwapụ nwere ike ịmezie ahazi aha gị, na-eme ka ọ bụrụ nke gị. Ọzọ, ọ na-enyere aka izere iji ihe ntanetụ na saịtị ma ọ bụ blọọgụ ndị ọzọ yiri nke gị.
Sitio na nchịkọta ihe oriri, ị nwere ike itinye okwu okwu ma ọ bụ nkọwa ndị na-adabere na gị dịka blogger, nke nwere ike ịbụ: onyeisi, nwa okorobịa, nwa agbọghọ, onye mbido, nọ, nri, n ab, nri, nri, nri , nri ehihie, ụlọ ọrụ, wdg
Debe ha ọnụ na ị ga-enweta ihe bara nnukwu uru dị ka nri ụmụaka kwesịrị ekwesị, jefe vegano munchies, ntụ ọka kichin ọhụrụ, ma ọ bụ ụlọ oriri na-edozi ahụ.
Conocí ike ime ya ka ọ gbakwunye ma gbakwunye ihe ngwa ngwa ma ọ bụ okwu dịgasị iche iche ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche. Ụfọdụ ihe atụ ga-abụ: ntụziaka nwa agbọghọ kwesịrị ekwesị, na-eri nri nri n’oge nri, ndị na-aṅụrị ọṅụ, dị mma ma dị ọhụrụ.
Ntụle ọkwa nke ọkwa: Iji Okwu emepụtara ma ọ bụ Ịchọta Okwu nke Gị
Maka ndị nwere mmasị, w nwere ike ịnwale ịmepụta ma ọ bụ mepụta okwu ọhụrụ ọ bụla ị ga-akpọ aha gị na blog gị.
Nke a na-achọ ntakịrị ihe na-eche echiche na-abụghị nke na-eche echiche ma ọ bụrụ na ime-elu nwere ike ịghọ ụzọ dị egwu iji gbakwunye egwu na aha aha gị. Ufodu ihe omuma atu bu snackzilla, ihe ndi ozo, sizzlerella, ahuike.
Atụla egwu ịnwale ụdị okwu ọbụla ma nwee obi ụtọ na ya. Ị nwere ike imeri aha dị mma nke ọ na-adịghị onye ọ bụla chere!
Ntuziaka # 4: Mgbe niile na-ada, Jiri Blog Aha / Okwu Generator
Ma eleghị anya, ị gbalịrị isi ihe niile dị n’elu ma ị ka na-enweghị ike ịbịara aha ọma. Enweghị nchekasị! Gbalịa jiri aha / okwu ngwaọrụ maka ụfọdụ aro dị ukwuu.
saịtị dị ka Wordroid.com bụ ngwá ọrụ dị ukwuu iji na-ejikọ ọnụ na okwu ọchị ma ọ dị mfe ime. Naanị tinye okwu nke metụtara ọdịnaya gị, pịa bọtịnụ "wordoids", ọ ga-enye gị ndepụta aha ndị ị nwere ike iji.
Ihe dị ukwuu banyere Wordroids bụ na ị nwere ike ịtọ ókè gị na okwu gị, kọwaa àgwà nke okwu ahụ, setịpụ ụkpụrụ ya, na ọbụna gụnyere ngalaba aha nnweta. Nke a pụtara na ị nwere ike ịchọpụta ma aha ịchọrọ ịdenyere aha na .com ma ọ bụ na ọ bụghị, na-ewepụta nchekasị nke ịmepụta ihe dị egwu ma chọpụta na e were ya.
Ịchọta Aha Aha Zuru Okè
E nwere ọtụtụ ụzọ ị ga – esi dee blog na n’ikpeazụ, ọ bụ gị ka ị ga – ekpebi ihe ọ bụ.
Ka o sina dị, ụmepụta aha agaghị abụ usoro ihe omimi. Nwee obi ụtọ ma soro ya mee ihe na ndị gụrụ gị ga-ahụ nke ahụ.
Cheta, enweghi iwu ndi siri ike mgbe abia ime aha. Ọ bụrụhaala na ị hụ na ọ na-ejikọta ọdịnaya gị, ị nwere ike ịbụ ihe okike dị ka ịchọrọ!
Ozugbo ị nwetara nke ahụ n’ụzọ debanye aha gị blog ngalaba, ị na-elekwasị anya n’ihe ndị ka mkpa dị ka ede ederede epic na eto eto gi.
Kedu ihe mgbagwoju kachasị na blogger ọbụla na-eche? Na-agbalịịhọrọ aha maka บล็อกฮา. ọkpọ blog
Kedu ihe mgbagwoju kachasị na bloggerju ọ bụla na-eche? Na-agbalị ịhọrọ aha maka blog
Yaa Adeegga Ugu Dambeeya ee Web Sitesi-ka Cusub?
10 meilleurs créateurs de sites Web de photographie | Mettez votre photographie au point dès aujourd’hui!
Black Friday et Cyber ​​Monday 2020: comment configurer votre magasin pour réussir
เปรียบเทียบปลั๊กอินการสำรองข้อมูล WordPress อันดับ 5
Wix eCommerce Review 2020: ce qu’il faut savoir sur les magasins Wix
Genesis หรือ Divi – วิธีเลือกระหว่างสอง …
Hosting Hikayem: Dib u eegida marti-gelinta magaalada
Revisión del creador de mensajes instantáneos: ¿debería crear en otro lugar?
WordPress Tutorial: วิธีสร้างปลั๊กอินข้อความรับรอง
Kaj storiti, ko nekdo ukrade vašo edinstveno vsebino spletnega mesta
Інтерв’ю експертів: Як побудувати локальний блог з Дженніфер Ауер
Fikir Başlangıçları: Yazmak İçin Konularla Gelmenize Yardımcı Olacak 20 Cümle